by EM News — August 11, 2014
လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေနှင့်စီတီဇင်ဂျာနယ်လစ်တွေအတွက်သူတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုတွေထိထိရောက်ရောက် ဖြန့်ချီထုပ်ဝေနိင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးလမ်းညွှန် ချက်တွေထုပ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်တွေထဲမှာမိုလ်ဘိုင်းဗီဒီယိုအသုံးပြုပုံကနေ အမှီအခိုကင်းတဲ့ ဗီဒီယိုဝက်ဆိုဒ် တည်ထောင်ပုံအထိပါဝင်ပြီးInternews Europ မှပံပိုး ကူညီခဲ့ပါတယ်။
1: အမှီအခိုကင်းတဲ့ ဗီဒီယိုဝက်ဆိုဒ် တည်ထောင်ပုံလမ်းညွှန် သင်ဟာသင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဗီဒီယီုမျှ ဝေခြင်းဝက်ဆုဒ် (သို့ )အပေါင်းအသင်းများနင့် စုပေါာင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ဗီဒီယီုမျှဝေခြင်း ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါသလားဒါဆို သင်ဟာဒီလက်စွဲလမ်းညွှန် ကိုဖတ် သင့်တယ်။ဒီလက်စွဲမှာ Wordpress, Drupal နဲ့ Plumi တို့လိုပဲ Free, libre open sourse software (FLOSS) အသုံးချ ဖြေ ရှင်း ပုံကို အဓိကရှင်းပြထားပြီး video4change မှအဖွဲ့ ဝင် မစ်ဖက်ဇစ်ကရေးသားထားပါတယ်။ floss လက်စွဲလို့ ခေါ် ပါတယ်။
2: တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများနှင့်ထိရောက်စွာဗီဒီယိုရိုက်ပုံ တစ်ကယ်လို့ သင်ဟာငွေကြေးအခက်အခဲရှိပြီးနောက်ဆုံးပေါ် ဗီဒီယီုကင်မရာတွေနဲ့ ဖုန်းတွေကိုဝယ်မသုံးနိင်တဲ့ဗီဒီယိုလှုပ်ရှားတက်ကြွ သူု (သို့)စီတီဇင်ဂျာနယ်လစ်သမားတစ်ဦးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာတွေ့မှာပါ ဒီလမ်းညွှန်ချက် မှာလက်ရှိကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ တန်ဖိုးနည်းကရီယာတွေနဲ့ပဲအရည်အသွေးကောင်းကောင်းရအောင်ဘယ်လိုရိုက် ကူးရမလည်းဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေပြထားပါတယ်။ Small World News လို့ ခေါ်တဲ့ လမ်ညွှန်ကို video4change မှဘရိုင်ယန်ကွန်လေးကရေးသားထားပါတယ်။
3: စီတီဇင် ဂျာနယ်လစ်တွေအတွက်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုလွှင့်တင်ပုံလမ်း ညွှန် သင်ဟာသင့်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဆန္ဒ ပြပွဲ တစ် ခုကို လွှင့် ထုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ စီတီဇင် ဂျာနယ်လစ်ဖြစ်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် သင်ဟာသင်မြင်တွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြားonline လောကကိုမျှဝေဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့အချိန် မှန်ကန်တဲ့နေရာရောက်နေပါသလား။ ဒီလိုမဖြစ်ခင်သင်ဟာဒီလမ်းညွှန်ကို ဖတ်ထားမယ်ဆိုရင် သိပ်အဆင်ပြေမှာပါ၊ လမ်းညွှန်ထဲမှာ တိုက်ရိုက် ဗီဒီယို လွှင့်တင်ခြင်းနှင်ပါတ်သက်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ နည်းဗျု ဟာတွေနဲ့ ကိရိယာ အသုံးပြုပုံတွေပါတယ်။ MIT Centre for Civic Media မှvideo4change အဖွဲ့ ဝင်ဘက်ကီဟာဝွစ်တ် ကရေးသားထားပြီးဒီလက်စွဲ မှာလူကြိုက်များတဲ့ ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်လွင်တင်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု တွေ၊ အင်စတောလုပ်ပုံသုံးပုံတွေကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်တွေလည်းပြထားပါတယ်။
4: တိဇင်ဂျာနယ်လစ်တွေအတွက်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုအသုံးပြုပုံ ဒီအခန်းမှာ ဗီဒီယို စီctivism နှင့်စီတီဇင်ဂျာနယ် လစ်ဇင်အတွက်သင့် ရဲ့ ဖုန်းကိုဘယ်လိုအသုံးချ ရမလည်း ဆိုတဲ့သင်သိသင့်တဲ့အရာအားလုံးပါဝင်သလို မိုဘိုင်းဗီဒီယိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတရား နည်းနာမျာနှင့်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ချီ နိင်မယ် application တေ၊ွအသုံး ပြုပုံ တွေ ပါလမ်းညွှန် ထားပါတယ်မစ်လစ်ဆာအောလ်ဘရိုက်က ရေးသားထားတာပါ။
စီတိဇင်ဂျာနယ်လစ်တွေအတွက်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုအသုံးပြုပုံ( လွယ်ကူစွာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိင်ဖို့အတွက် လက်စွဲကျမ်းများကိုအခန်များစွာမှာဖြန့်ကျက်ပြထား)
မိတ် ဆက်။ ဒီလမ်းညွှန်ဟာလူကြိုက်များတဲ့ ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်လွင်တင်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု တွေ၊ အင်စတောလုပ်ပုံသုံးပုံတွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုဖို့ ဘယ်လိုစတင်ရမလည်းဆိုတာရှင်းပြထားပါသည်။
ပြင်ဆင် စတင် ပုံ ;ရိုက်ကူးပြီးနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်
ပြင်ဆင် စတင် ပုံ ;ဗီ ဒီယိုအရေအသွေးနှင့် ကရီယာတန်ဆာပလာများ
စီတီဇင်ဂျာနယ်လစ် တွေ အတွက်လက်ကိုင်ဖုန်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းချင်းရာများ
ဒီလမ်းညွှန်ဟာလူကြိုက်များတဲ့ ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်လွင်တင်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု တွေ၊ အင်စတောလုပ်ပုံသုံးပုံတွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုပုံတွေကို လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်လေ့ကျင့် နိင်အောင်လည်းညွှန်ကြားထားပါသည်။
by EM News — August 06, 2014
EngageMedia's new initiative, Suara Baru (New Voices), features videos on young Indonesians and their views on its landmark presidential elections.
Indonesia holds its presidential election on9July 2014. This is set to be an important election for the country, with those in power from the New Order regime trying to makeacomeback.
As over one-third of the projected 186 million eligible voters will be first-time voters, this election presents an opportunity where young people could makeahuge difference in the outcomes.
With this in mind, EngageMedia launched Suara Baru (New Voices), where we invited young filmmakers to create video stories in order to understand youth perspectives on the elections from Java to West Papua to migrant workers in Malaysia. Some of the produced videos are featured below, while the full collection is available here.
A young man describes the tragic state of his village inaletter to the Indonesian president. Will it ever be replied to?
The Hopes of Papuan Youth
What do young people in Raja Ampat, West Papua want the next Indonesian president to deliver?
A candid look at why some Indonesians are not voting this round. The reasons range from apathy to administration, all expressed withasmile.
Choices of Indonesians in Malaysia
Malaysia currently hosts over two million Indonesian migrant workers. This video features some of their views on the 2014 presidential elections.
This election has been widely dubbed as the ‘social media elections’. But why has engagement on social media turned youth who were friends into enemies?
Follow our election updates!
We'll be posting updates on and after polling day (9 July 2014) so be sure to follow us on Facebook and Twitter for more news and videos!